Izindaba - Ulwazi lokwahlukanisa abapheki bokungeniswa
Ekhishini, i-induction cooker ingenye yezinto zasekhishini ezivame kakhulu.Kodwa ekuhlukanisweni kwe-induction cooker ucace ngamunye ngamunye? Yini umpheki wethu ovamile wokungeniswa? I-athikili elandelayo ichaza ukuhlukaniswa kompheki wokungeniswa ngokuningiliziwe, bheka ngokucophelela!
Ngokwamandla we-induction cooker angahlukaniswa nge-induction cooker kanye ne-commercial induction cooker Ngokuya ngezigaba zekhanda lesithando somlilo, umpheki wokungeniswa wasekhaya angahlukaniswa abe yipheki elilodwa, i-cooker kabili, i-cooker eminingi kanye nogesi owodwa igesi elilodwa.
Ngokwamandla we-induction cooker angahlukaniswa abe cooker wasekhaya induction kanye ne-commercial induction cooker.
Amandla asebenzayo okupheka okukodwa yi-120V-280V, futhi evame kakhulu yi-1900W-2200W, esetshenziswa kakhulu ekuphekeni komndeni.Yathuthuka ekuqaleni futhi isetshenziswe kakhulu ezweni lethu.
Amandla asebenzayo esithandweni somlilo esinezinhloko ezimbili nawo angama-120V-280V. Njengamanje, kukhona ifulethi elilodwa nelilodwa elihlangene futhi amabili ayizicaba emakethe yasekhaya. Amandla ompheki ojwayelekile oyedwa angama-2100W, kanti umpheki ophindwe kabili osebenza ngasikhathi sinye awekho ngaphezu kwama-3500W.
Izipheki eziningi, imvamisa zokupheka ezimbili zokungeniswa kanye ne-infrared cooker.Izikhathi ezisebenzisekayo: noma iyiphi indawo lapho kusetshenziswa khona izitofu zendabuko, njengezibhedlela, izimboni nezimayini, amahhotela, izindawo zokudla, amakolishi namayunivesithi, izikhungo, njll. ngaphandle kokuphakelwa kukaphethiloli noma ukusetshenziswa okuvinjelwe kukaphethiloli, okufana negumbi elingaphansi, ujantshi, izimoto, imikhumbi, ukundiza nezinye izinto ezenziwa eChina, ikakhulukazi ukuthuthukiswa okusheshayo kwamandla kagesi, lesi sipheki sokungenisa esinamandla amakhulu sizosetshenziswa kabanzi.
Ugesi owodwa igesi elilodwa
Ugesi owodwa wegesi uyinhlanganisela yokupheka kokungeniswa kanye nemikhiqizo yesitofu segesi, ikhanda lesithando somlilo lingasebenzisa igesi yendabuko, elinye ikhanda lesithando somlilo lisebenzisa i-induction cooker, amandla ajwayelekile u-2100W, yimikhiqizo emibili evelayo.